Soosaarayaasha Dhalada Muraayadda ah | Shiinaha Glass Dhalo Shirkado & Warshad
Qalabka aqoon isweydaarsiga
Alaabada Xirmooyinka Caaga ah
Aluminium-caaga jiidaya Dhalada Dhalada
Koofiyadaha caaga ah
Dhalooyinka cagaaran iyo dhalooyinka biirka
Dhalada qurxinta Material Waxyaabaha Caafimaadka iyo Nabdoonaanta leh bottle - Dhalada lagu buufiyo ceeryaanta waxaa laga sameeyaa maaddooyin la oggolaaday, oo aan lahayn BPA, aan lahayn sunta rasaasta. Dhanka kale, dhalooyinkan oo dhami waa kuwo dib loo isticmaali karo, waad nadiifin kartaa ka dib markii ugu horreysay ee aad isticmaasho oo si fiican ayaad u keydin kartaa. Design Naqshadeynta caddayn-la'aanta】 - Dhalada buufinta yar ee balaastigga ah waxay ku qalabeysan tahay dabool iyo wareegga loo yaqaan 'dheecaanka-caddeyn la'aanta ah' taas oo ka ilaalinaysa boorsooyinkaaga inay daadadaan oo ay daadadaan. Naqshaddani waxay kaa dhigeysaa inaad dareento xasilooni dheeraad ah inta lagu jiro safarka. Ray Buufiska Mashiinka Buuxda】 - Dhalooyinka lagu buufiyo waxay qaataan nanometer ...
Dhalooyinka cabitaannada fudud iyo dhalooyinka cadarka
Dhalada saliida ah ee saliida leh Karso cuntada ugu dhadhanka iyo caafimaadka badan  Waxay ilaalisaa saliidaada saytuunka ah ee laga ilaaliyo soo gaadhista ogsijiinta, iftiinka & kulaylka  Lagu sameeyay muraayad tayo sare leh h Adeegga wanaagsan, adkeysi leh & burbursan shat Adeeg wanaagsan: waxaan leenahay heer sare kooxda, si ay kuu siiyaan adeegga ugu tayada fiican. FHaddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan nala soo xiriir. EWaxaan ku daryeeli doonnaa waqtiga. Supply: Waxaan leenahay warshad noo gaar ah, marka waxaan soo bandhigi karnaa wax soo saarkeena. Warshadeenu waxay ku takhasustay saliida saytuunka t ...
Dhalooyinka Grolsch ee Beerta Biirista. Dhalooyinka Xirmooyinka waxay ku fiican yihiin Beer Sameynta, Dhalooyinka Kombucha, ama Dhalooyinka Halsano! Dhalooyinkaan Flip Top waxay ka dhigayaan fududeynta Aaladaha Guryaha! Dhalo Kasta oo Dhalada ah oo Dhalada ah si adag u xir. Beer-kaaga ayaa sii ahaanaya mid cusub oo lagu ilaalin doono Khatarta dhaladaas Swing Sare Dhalada Amber Glass waxay ka ilaalisaa waxyaabaha ku jira falaadhaha UV-ga ee waxyeelada leh. Dhalooyinka buniga ah ee buniga ah waxaa laga door bidaa Dhalooyinka Biir ama Dhalooyinka khafiifa! Dhalooyinka Dhalada leh Caps waxay hayaan 500 mL, ama 16 oz, oo u dhiganta 1 Pint. Dar ...
Karso cuntada ugu dhadhanka badan uguna caafimaadka badan Waxay ka ilaalisaa saliidaada saytuunka inay ka ilaaliso soo gaadhista oksijiinta, iftiinka & kuleylka Lagu sameeyay muraayad tayo sare leh Qafiif ah, waaraya & jajaban u adkaysta Adeeg wanaagsan: waxaan haysanaa koox aad u fiican, si aan kuu siino adeegga ugu tayada fiican. . Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, fadlan nala soo xiriir. Waxaan ku daryeeli doonnaa waqtigeeda. Sahay: Waxaan leenahay warshad noo gaar ah, sidaa darteed waxaan ku bixin karnaa wax soo saarkeena. Warshaddeenu waxay ku takhasustay saliidda saytuunka in ka badan toban sano, waa xirfadle ...
Magaca Kabaha Khamriga Khamriga Khamriga 250ml, 375ml, 500ml, 750 ml Nooca xirashada fur fur furka / pcc cork Baako sariirtaada alwaax, mid ka mid ah 40HQ: 21 boodhadh. hal sariir: 1575 gogo '. ama kartoonka xaashida MOQ 10000 gogo 'Sample Offer haa Sample Arrangement Marka la xaqiijiyo, tijaabada waxaa lagu soo diri doonaa 7 maalmood gudahood. Awoodda kaftanka waa 750 ml, casaan cas. Waxay leedahay muuqaal qurxoon, nadiif ah oo leh muraayad birqaab ah iyo gunta hoose ee feerka Waxaan kaabsal ku leenahay nashqad qurxoon, ma jiro dun la arki karo, waxaanna sameysaneynaa wax caddeyn ...
Magaca badeecada 250ml daryeelka shakhsi ahaaneed ee daryeelka shakhsi ahaaneed PET dhalooyinka shaamboo dhalada Midab Awood kartoo 250ml MOQ 10000pcs Miisaanka 23g Cabbirka Neck 24/410 Tilmaamaha Tilmaamaha: 1. Qalabka: PET. Qalabka asalka ahi gabi ahaanba waa nadiif oo waa cusub yahay, deegaan, si fiican ugu habboon baakadaha qurxinta, baakadaha caafimaadka iyo cuntada sidoo kale. 2. Midab: Pantone-ka midabada ama shay-baarka dhabta ah ee tixraaca. 3. Daabacadaha: Daabacaadda Xarka, shaabad kulul iyo daabacaadda dejinta, warqad la ...
Dhalada Qurxinta Material Waxyaabaha Caafimaadka iyo Nabdoonaanta leh bottle - Dhalada lagu buufiyo ceeryaanta waxaa laga sameeyaa maaddooyin la oggolaaday, oo aan lahayn BPA, aan lahayn sunta rasaasta. Dhanka kale, dhalooyinkan oo dhami waa kuwo dib loo isticmaali karo, waad nadiifin kartaa ka dib markii ugu horreysay ee aad isticmaasho oo si fiican ayaad u keydin kartaa. Design Naqshadeynta caddayn-la'aanta】 - Dhalada buufinta yar ee balaastigga ah waxay ku qalabeysan tahay dabool iyo wareegga loo yaqaan 'dheecaanka-caddeyn la'aanta ah' taas oo ka ilaalinaysa boorsooyinkaaga inay daadadaan oo ay daadadaan. Naqshaddani waxay kaa dhigeysaa inaad dareento xasilooni dheeraad ah inta lagu jiro safarka. Ray Buufiska Mashiinka Buufin】 - Dhalooyinka lagu buufiyo waxay qaataan nanomete ...
Dhaladayada barafka cad ee dhaldhalaalka ah ee dhalaalaya ayaa ah weelka ugu fiican ee cadarkaaga iyo barafuunka. Waxaad si fudud u buuxin kartaa isku darka gaarka ah ee saliidaha lagama maarmaanka ah, ama ku shub cadarrada aad ugu jeceshahay adduunka oo idil. Waxay sidoo kale ku habboon tahay sameynta cadarka cabbirka cabbirka ama haddiyadaha Kirismaska. Dhalooyinkayaga qaaliga ahi waxay hayaan ilaa hal wiqiyadood oo ka mid ah carafta aad ka hesho. Atomizer biraha dhalaalaya buufiyo caraf udgoon. Daboolka fiiqan ee loo yaqaan 'frosted acrylic cap' wuxuu ku darayaa heer wax hagaajin ah oo dhalooyinka kale aysan sameynin, mana ...